SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (24361, 24365, 25959, 25966, 25971) ORDER BY t.name ASC
တိုင်ကြားစာ၊အသနားခံစာ တင်ပြစာကဏ္ဍ – ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
Category: တိုင်ကြားစာ၊အသနားခံစာ တင်ပြစာကဏ္ဍ
Posted on January 28, 2021 by bgoper
Posted on January 28, 2021 (January 28, 2021) by bgoper
Posted on December 26, 2020 (January 28, 2021) by bgoper
ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ပဲခူးခရိုင်၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ပြည်ခရိုင်၊ သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးမှ ပေးပို့တိုင်ကြားလာသော တိုင်ကြားစာများနှင့် တင်ပြစာများအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ(၁၆.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၅.၁၀.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
Posted on November 26, 2020 (November 26, 2020) by bgoper
ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ပဲခူးခရိုင်၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ပြည်ခရိုင်၊ သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးမှ ပေးပို့တိုင်ကြားလာသော တိုင်ကြားစာများနှင့် တင်ပြစာများအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ(၁၆.၁၀.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၅.၁၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (25985, 25989, 25997) ORDER BY t.name ASC